D2Pros —— Warshad kamarad duuban oo kumbiyuutarro badan leh iyo kuwa soo saara | Roobab
Maqaalka Kala hadal iibka
Sawirro tayo sare leh ， awood leh oo lagu kalsoonaan karo qaabaynta 3D
D2M / DG3M Nidaamka qaabeynta 3D kamarad-laba-geesood ah
D2Pros —— Kaamirooyinka kumbuyuutarrada kumbuyuutareedka ugu fiican ee roon
D2 / D3 —— Inta badan kamarado iskudhafan oo iskudhaf ah
DG3 —— Kaamerada ugu yar yar ee APS-C drone oblique
DG3Pros —— Kameradda ugu fiican ee loo yaqaan 'AP'-drone oblique camera
DG4Pros —— Kameradda ugu weyn ee bilaa duuliyaha ah
RIS kaamirooyinka jajaban
khafiif ah iyo mid yar-saxnaan sare leh oo sawir duullimaadka ah oo dulmarsan
RIE kaamirooyinka hal lens-ka ah
Khariidad sawir qaadis xirfad-yaqaan ah iyo mid sarsare oo sare ah
Qalabka yar yar matters arrimaha waaweyn
AP-1 Halbeegga-U-hagaaji Module
Module-Kaydinta Xogta HS
Sky-filter Software Filter-out Software
Mashiinka Sky-scanner-ka Software-ka Kahortaga
Sky-target AT Meelaynta Software
RIY-yada kamaradaha RIS kaamirooyinka jajaban RIE kaamirooyinka hal lens-ka ah
Soo saaraha kamarada ugu weyn Shiinaha ayaa la aas aasay sanadkii 2015, Roobpoo wuxuu xooga saarayay dhanka qallooca
Ka fiican yahay fududeeyaha
Kii ugu horreeyay ee soo saara kamarad shan-lens ah oo udhaxeysa 1000g (D2) ， ka dibna DG3 (650g), ka dibna DG3mini (400g).
Hal kamarad, shan muraayadood. Isku-dhafkan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sawirro ka soo ururiso shan aragti oo hal duulimaad ah.
Ku baro qalliinka 10 daqiiqo
Naqshadeynta qaybsan ayaa u sahlaysa qof walba inuu barto sida loo rakibo loona isticmaalo kamaradaha.
Sawir tayo sare leh oo sax ah
Muraayad indha-sarcaad leh oo madax-bannaan ayaa lagu sameeyay Lab-Gauβ lagu rakibay iyo muraayadaha 'Aspherical lens' oo u baahsan hooseeya
Soo-gaadhista waqtiga-farqiga shan muraayadaha indhaha ayaa ka yar 10ns.
Xoog leh oo ammaan ah
Qolof ka samaysan magnesium-aluminium daawaha ayaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo muraayadaha indhaha, iyo sababta oo ah
Waxaa lagu dhex dari karaa noocyo badan oo drones ah
Hadday tahay rooorro badan oo UAV ah, diyaarad bilaa duuliyaha ah, ama VTOL, kamaradahayagu waa lagu dhex dari karaa iyaga iyo f ...
Sahan / GIS
Sahaminta dhulka ， Cartografia ， Joogtada ah surve Sahaminta Cadastral ， DEM / DOM / DSM / DLG
GIS planning Qorsheynta Magaalada ， Maareynta maareynta magaalada ee dhijitaalka ah registration Diiwaangelinta-guryaha
Dhismaha / Macdanta
xisaabinta dhulka, cabirka mugga ， ilaalinta-kormeerka
Dalxiiska / Dhismayaasha qadiimiga ah
3D muuqaal dabiici ah town Magaalo dabeecad leh ， Muuqaal 3D-muuqaal ah
Milatariga / Booliska
dib u dhiska dhulgariirkii ka dib ， Dambi baadhe iyo dib u dhiska aagga qaraxa area Aagga musiibada i ...
- MAXAA RAINPOO
- ADEEGA MASHRUUCA
- Kala hadal iibka
U dooro kamarad ku habboon oo xirfad leh drones-kaaga
Soo dejinta xogta
Jiilka cusub wuxuu keenaa saameyn wanaagsan oo qaabeyn wanaagsan 3D ah
RIY-D2 PROS waa mid ka mid ah jiilka cusub ee wax soo saarka Rainpoo, oo la jaan qaada inta badan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee suuqa, waxaana badanaa lagu dabaqaa muuqaalada leh shuruudaha saxda ah ee sare sida 1: 500 dhul cabir / cadastral. Kaamiradu waxay qaadataa aaladaha muraayadaha ee si madaxbanaan loo soo saaray Rainpoo, oo leh kala firidh hoose iyo dhalanrog hooseeya iyo cidhiidhi sare oo sawirrada hawada ah. Kaamiradu waxay leedahay nidaam ku-faafidda kuleylka waxayna kordhisay cabbirka xusuusta, taas oo hubineysa hawlgalka muddada-dheer ee kamaradda jawiga heerkulka sarreeya.
Waa maxay qaabka macluumaadka ceeriin sidee ayaan u maleynayaa inaan ugu shaqeynayo?
qaabka sawirada ceeriin waa .jpg.
Badanaa duulimaadka ka dib, marka hore waxaan u baahanahay inaan ka soo dejino kaamerada, taas oo u baahan barnaamijka aan ugu talagalnay "Sky-Scanner". Iyadoo barnaamijkan, waxaan ku soo dejisan karnaa hal fure, isla markaana aan si toos ah u soo saarnaa faylalka xannibaadda 'ContextCapture' sidoo kale.
Nala soo xiriir si aan wax badan uga ogaanno sawirro cayriin>
Nidaamka rakibaadda ee dhufto ee kala duwan ama garabka go'an UAV ama diyaarado yar?
RIY-DG4 PROS waxaa lagu dhejin karaa labadaba rotor-wadayaasha iyo garabka go'an ee loogu talagalay helitaanka xogta sawir qaadista ah. Sababta oo ah qeybta xakamaynta, qaybta gudbinta xogta iyo nidaamyada kale waa kuwo qaabaysan, sidaa darteed waa sahlan tahay in la rakibo oo la beddelo. oo leh shirkado badan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah ee adduunka oo dhan, labadaba baallayaal go'an iyo kuwa rotor-badan iyo VTOL iyo helikobtar, waxay soo baxday dhammaantood in si fiican loo waafajiyay.
Maxay iswaafajinta shan-lenses muhiim u tahay?
Dhamaanteen waan ognahay in inta lagu jiro duulimaadka diyaaradaha aan duuliyaha laheyn, astaamaha kicinta la siin doono shanta muraayadaha indhaha ee kamaradda obique. Aragti ahaan, shanta muraayadaha indhaha waa in si isku mid ah loo soo bandhigaa, ka dibna xogta POS isku mar ayaa la duubi doonaa.
Laakiin xaqiijin dhab ah ka dib, waxaan gaarnay gabagabo: hadba sida ay u sii murugsan tahay macluumaadka muuqaalka goobta, waxaa sii weynaanaya xaddiga xogta muraayadaha ay xallin karaan, isku cadaadinayaan, iyo keydinayaan, iyo waqtiga badan ee ay ku qaadato in lagu dhammeeyo duubista.
Haddii inta udhaxeysa calaamadaha kicinta ay ka yartahay waqtiga loogu baahan yahay muraayada si loo dhameystiro duubista, kamaradu ma awoodo inay sameyso soo bandhigida, taas oo keeni doonta "sawir maqan".
BTW,ah waafajinta sidoo kale waa mid aad muhiim ugu ah calaamadaha PPK.
Waa maxay waxtarka shaqada ee DG4Pros? Sideen u dejiyaa xuduudaha ku habboon?
DJI M600Pro + DG4Faa'iido
Joogga duulimaadka （m）
Xawaaraha duulimaadka （m / s）
Meesha kaliya ee duulimaadka （km2）
Lambarka sawirka keliya
Tirada duulimaadyada maalin dhan
Wadarta aagga shaqada Hal maalin （km2）
Table Shaxda halbeegga oo lagu xisaabiyay heerka isugeynta dheer ee 80% iyo heerka isugeynta ee 70% （waxaan kugula talineynaa）
Diyaarad aan duuliye wadin + DG4Faa'iido
Duulimaad keli ah
aagga shaqada （km2）
Wadarta aagga shaqada
Hal maalin （km2）
Nala soo xiriir si aad u hesho furaha>
Kiis guul ah oo sawir qayaxan ah
——U adeegso tusaalaha 3D si aad u sameyso sahaminta cadastral ee meelaha dhaadheer
Ka dib dhowr sano oo horumar ah, hadda Shiinaha, sawir qaadista ayaa si ballaaran loogu isticmaalay mashaariicda sahaminta ee baadiyaha miyiga. Si kastaba ha noqotee, xaddidaadda xaaladaha farsamo ee qalabka, sawir qaadista ayaa wali daciif u ah cabbirka cadastral ee goobaha waaweyn, badanaa sababta oo ah dhererka diiradda iyo qaabka sawirka muraayadaha muraayadda kama-dambaysta ah. Ka dib sannado badan oo waayo-aragnimo mashruuc ah, waxaan ogaanay in saxnaanta khariidaddu ay ahaato gudaha 5 cm, markaa GSD waa inuu ahaadaa gudaha 2 cm, iyo qaabka 3D waa inuu ahaadaa mid aad u wanaagsan, geesaha dhismaha waa inay ahaadaan kuwo toosan oo cad.
Guud ahaan, dhererka dhererka kamaradda ee loo adeegsado mashaariicda cabbiraadda cadastral-ka ee miyiga waa 25mm oo toosan iyo 35mm qallafsan. Si loo gaaro saxsanaanta 1: 500, GSD waa inuu ahaadaa gudaha 2 cm. Iyo in la hubiyo ， joogga duulimaadka ee drones-ka guud ahaan inuu u dhexeeyo 70m-100m. Marka loo eego joogga duulimaadkan, ma jirto waddo lagu dhammaystiri karo ururinta xogta ee dhismayaasha ka sarreeya 100m. Xitaa haddii aad duulimaad sameyso si kasta ha noqotee, ma ballan qaadi karto isku-dul-fuulashada saqafyada, taasoo ka dhalanaysa tayada liidata ee tusaalaha Sababtoo ah dhererka dagaalladu aad buu u hooseeya, aad bay khatar ugu tahay UAV.
Si loo xalliyo dhibaatadan, bishii Maajo 2019, waxaan qaadnay tijaabada hubinta saxda ah ee Sawirka Sawirka ee dhismayaasha dhaadheer ee magaalooyinka. Ujeedada tijaabadan ayaa ah in la xaqiijiyo in saxnaanta khariidadeynta ugu dambeysa ee qaabka 3D ee ay dhistay RIY-DG4pros kaamerada qallooca ay buuxin karto shuruudaha 5 cm RMSE.
2. Nidaamka Imtixaanka
Imtixaankan, waxaan ku dooranaynaa DJI M600PRO, oo ku qalabaysan Rainpoo RIY-DG4pros kamarad shaashad shan-lens ah.
Aagga sahaminta iyo qorshaynta dhibcaha
Iyada oo laga jawaabayo dhibaatooyinka kor ku xusan, iyo in dhibaatada la kordhiyo, waxaan si gaar ah u dooranay labo unug oo celcelis ahaan dhererkoodu yahay 100 mitir si loo tijaabiyo.
Meelaha kontoroolku waa hore loo sii dejiyey sida ku cad khariidadda GOOGLE, deegaanka ku hareeraysanna waa inuu noqdaa mid furan oo aan laga horjoogsan karin intii suurtagal ah. Masaafada udhaxeysa dhibcaha waxay kujirtaa inta udhaxeysa 150-200M.
Barta kontoroolku waa 80 * 80 laba jibbaaran, oo loo qaybiyay casaan iyo jaalle marka loo eego xagasha, si loo hubiyo in barta barta si cad loogu garan karo marka milicsiga uu aad u xoog badan yahay ama iftiinka uusan ku filnayn, si loo wanaajiyo saxnaanta.
Si loo hubiyo badqabka howlgalka, waxaan keydinay joog nabdoon oo ah 60 mitir, UAV-na waxay ku duushay 160 mitir. Si loo hubiyo isku-darka saqafka, waxaan sidoo kale kordhinay sicirka isku-laaban. Qiyaasta isugeynta dhererka dheer waa 85% iyo heerka isdhaafka transversal waa 80%, UAV waxay ku duushay 9.8m / s xawaare.
Warbixinta Triangulation (AT)
Adeegso softiweerka "Sky-Scanner" (oo ay soo saartay Rainpoo) si aad u soo dejiso oo aad horay ugu socodsiiso sawirrada asalka ah, ka dibna ugu soo dejiso barnaamijka "ContextCapture 3D" software halbeega ah.
Warbixinta qallooca Lens
Marka laga eego jaantuska shaashadda qallooca, waxaa laga arki karaa in dhaldhalaalka muraayadaha ee RIY-DG4pros uu aad u yar yahay, wareegiina uu gebi ahaanba ku beegan yahay jaangooyada caadiga ah;
Baadi celinta RMS
Waad ku mahadsan tahay tiknoolajiyada indhaha ee Rainpoo, waxaan xakameyn karnaa qiimaha RMS ee gudaha 0.55, taas oo muhiim u ah saxnaanta qaabka 3D.
Waa la arki karaa in masaafada udhaxeysa barta ugu weyn ee muraayada toosan ee bartanka iyo barta ugu weyn ee muraayadaha indhaha laga leexdo ay kala yihiin: 1.63cm, 4.02cm, 4.68cm, 7.99cm, laga jaray farqiga dhabta ah ee booska, qiimaha qaladku waa: - 4.37cm, -1.98cm, -1.32cm, 1.99cm, farqiga ugu badan ee booska waa 4.37cm, iskuduwaha kamarada waxaa lagu xakamayn karaa 5ms gudahood;
RMS ee dhibcaha xakamaynta iyo dhabta ah waxay u dhexeeyaan 0.12 ilaa 0.47 pixels.
Waan arki karnaa taas maxaa yeelay RIY-DG4pros wuxuu adeegsadaa muraayadaha dhaadheer ee dhererka focal, guriga salka ugu hooseeya qaabka 3d waa mid aad u cad in la arko. Waqtiga ugu yar ee soo-gaadhista kamaraddu waxay gaari kartaa 0.6s, sidaa darteed xitaa haddii heerka isku-darka dheer loo kordhiyo illaa 85%, ma jiro wax sawir-bax ah oo dhacaya. Khadadka cagaha ee dhismayaasha dhaadheer waa kuwo aad u cad oo asal ahaan toosan, taas oo sidoo kale hubineysa inaan ku heli karno raadad sax ah qaabka ugu dambeeya.
4. Hubinta Xaqiijinta
Waxaan u adeegsanaa wadarta saldhigga si aan u ururino xogta booska barta-jeegagga ka dibna aan u soo dhoofino faylka DAT CAD. Kadib si toos ah isbarbar dhig qodobada xogta boosaska tusaalaha si aad u aragto kala duwanaanshahooda.
Imtixaankan, dhibka ayaa ah dhibicda sare iyo hoose ee muuqaalka, cufnaanta sare ee guriga iyo dabaqa qalafsan. Waxyaabahani waxay horseedi doonaan kordhinta dhibaatada duulista, halista sare, iyo qaabka 3D ee xun, taas oo horseedi doonta hoos u dhaca saxnaanta sahaminta cadastral.
Sababtoo ah dhererka udubdhexaadka RIY-DG4pros wuxuu ka dheer yahay kamaradaha caadiga ah, waxay xaqiijineysaa in UAVkeenu ku duuli karo meel nabadgelyo leh oo ku filan, iyo in xallinta muuqaalka walxaha dhulka ay ku jiraan 2 cm. Isla mar ahaantaana, muraayadaha muraayadaha buuxa ayaa naga caawin kara inaan qabanno xaglo badan oo guryaha ah markii aan duulimaad ku sameyneyno goobaha dhismaha cufnaanta sare leh, sidaas darteedna kor loogu qaadayo tayada qaabka 3D. Iyada oo la adeegsanayo qaddiyadda in dhammaan qalabka qalabka la damaanad qaado, waxaan sidoo kale hagaajineynaa isku duubnaanta duulimaadka iyo cufnaanta qaybinta ee dhibcaha kontaroolka si loo hubiyo saxnaanta qaabka 3D.
sawir qafiif ah oo loogu talagalay aagagga dhaadheer ee sahaminta cadastral, hal mar sababtoo ah xaddidaadda qalabka iyo khibrad la'aanta, waxaa kaliya lagu cabbiri karaa hababka dhaqameed. Laakiin saameynta dhismayaasha dhaadheer ay ku leeyihiin signaalka RTK sidoo kale waxay sababtaa dhibka iyo saxsanaanta cabirka. Haddii aan u adeegsan karno UAV ururinta xogta, saameynta astaamaha dayax gacmeedka ayaa gebi ahaanba la baabi'in karaa, iyo saxnaanta guud ee cabbirka si weyn ayaa loo horumarin karaa. Marka guusha tijaabadan ayaa ahmiyad weyn noo leh.
Tijaabadani waxay cadeyneysaa in RIY-DG4pros uu runtii maamuli karo RMS qiime yar, wuxuu leeyahay saxsanaanta tusaalaha 3D wanaagsan, waxaana loo isticmaali karaa mashaariicda qiyaasta saxda ah ee dhismooyinka sare.
Cabirka kaamirada 130 * 170 * 80mm
Miisaanka kamaradda 720g
Lambarka CMOS 5pcs
Cabbirka dareeraha 23.5 * 15.6mm
Tirada pixels (Wadarta) 20120 milyan
Muddada ugu yar ee soo-gaadhista .90.9s
Habka gaadhista kamaradda Soo-gaadhista Isochronic / Isometric
Habka sahayda korantada Awood koronto oo mideysan
Hordhaca xogta SKYSCANNER (GPS / IMU)
Awoodda xusuusta 640g
Xawaaraha xogta ≥80m / s
RIY-yada kamaradahaRIS kaamirooyinka jajabanRIE kaamirooyinka hal lens-ka ahQalabka
Sahan / GISMagaalada SmartDhismaha / MacdantaDalxiiska / Dhismayaasha qadiimiga ahMilatariga / Booliska
Wararka ShirkadahaWarka Warshadaha
Taariikhda RainpooGallery sharafWada-hawlgalayaasha / Shirkadaha
Dabaqa 14aad, No.377 Ningbo Road, Tianfu New Area, Chengdu, Sichuan, Shiinaha
Taageerada dibada ： +8619808149372
Sanduuqa boostada ： jack@rainpoo.com